အပတ်စဉ် အနုသုခုမအညွှန်း - YOYARLAY Digital Media and News
Published: October 12, 20187:07 am Updated: March 1, 20193:41 pm
မင်္ဂလာပါ … အပတ်စဉ် အနုသုခုမအညွှန်းကဏ္ဍကနေ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ အနုသုခုမအညွှန်းမှာတော့ “LGBT” အသားပေးလိုက်ကြရအောင်… တကယ်တော့ ယောက်ျား၊ မိန်းမ စတဲ့ ပညတ်ချက်တွေကို ဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမဆို လူချည်းပဲ မဟုတ်လား…
လူကို လူက ချစ်လို့ ဖြစ်လာတဲ့ သဘာဝတရားကို ကျွန်တော်တို့က ဘာတွေအကြောင်းပြုပြီး တားဆီးကန့်ကွက်နေကြမှာလဲနော်..။
စာအုပ်အတွက်တော့ ကျွန်တော်က ဆရာ “ဇော်ညီညီ” ရဲ့ “လွတ်မြောက်ပါတော့ သူ့နယ်မြေ” ဆိုတဲ့ စာအုပ်လေးကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ ဒီစာအုပ်မှာ နတ်ဝင်သည်၊ နတ်ကတော်လို့ ကျွန်တော်တို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ အမျိုးသား (မိန်းမလျာ) တစ်ယောက် နဲ့ သူ့ချစ်သူ အမျိုးသားတို့အကြောင်း ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ရေးဖွဲ့ထားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ အရေးရှင်းသလို အတွေးလည်း ရှင်းတဲ့ စာရေးဆရာဟာ နတ်အသိုင်းအဝိုင်းကြားက ယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း ပါးပါးလေး ထည့်ပြသွားပါသေးတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဘယ်လိုပဲ မသက်ဆိုင် ကွာခြားတဲ့ အယူဖြစ်နေပါစေ၊ သူ့ဒေသ၊ သူ့အစွဲနဲ့ သူ့ရိုးရာကတော့ မယုံကြည်လိုကနေ၊ ယုံကြည်သူတွေကတော့ ယုံကြည်နေကြဆဲ မဟုတ်လား?
လူတစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်က ချစ်တဲ့အချစ်ဟာ ချစ်ခြင်းသက်သက်သာမို့ ယောက်ျားတစ်ယောက်က ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မိန်းမတစ်ယောက်က မိန်းမ တစ်ယောက်ကို ချစ်သည်ဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားနဲ့ မိန်းမ မေတ္တာမျှကြသည်ဖြစ်စေ၊ ချစ်ခြင်းစစ်မှန်ဖို့ပဲ လိုတယ်ဆိုတာကိုလည်း စာရေးဆရာက ပြသွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ဒီလို လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှု မတူညီကွဲပြားတဲ့သူတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ ဒီခွဲခြားမှုတွေကို မြင်သာအောင် ပါးပါးလေး လှစ်ပြသွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ စကားတွေဟာ လူတစ်ယောက်ကို မသိစိတ်ထဲမှာရော ၊ သိစိတ်ထဲမှာပါ လွှမ်းမိုးစေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပါ တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမှ ချစ်မိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ မလုံခြုံစိတ်၊ စိုးရိမ်စိတ်၊ သံသယစိတ်တွေဟာ ယုံကြည်မှုတစ်ခုကို ဘယ်လောက်ထိ ပျက်ပြားအောင် လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်း မြင်သာထင်သာတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ ပြောနေကြာတယ်.. ဖတ်ကြည့်ဗျာ…နော်..။
ရုပ်ရှင်အနေနဲ့တော့ ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့ “ The Danish Girl” ရုပ်ရှင်ကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ တကယ့်အဖြစ်မှန်ကို အခြေခံထားတဲ့ ရုပ်ရှင်ပါ။ ငယ်ရွယ်နုပျိုတဲ့ ပန်းချီဆရာမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာ ဘဝကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနေကြပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမောင်နှံမှာ ဇနီးဖြစ်သူက အမျိုးသားထက် ပိုပြီး အောင်မြင်တဲ့ ပန်းချီဆရာမတစ်ယောက်ပါ။ ဆိုတော့ တစ်ရက် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပုံ ပန်းချီဆွဲရဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ မော်ဒယ်လ်လည်း အဆင်သင့်မရှိတာမို့ ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပဲ မိန်းကလေးလို ဆင်ယင်လို့ မော်ဒယ်လ်ထိုင်ပေးဖို့ အကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းက ဒီကစတာပါပဲ။
သူ(မ)ဆွဲလိုက်တဲ့ ဒီပန်းချီကားက အောင်မြင်သွားခဲ့ပေမဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခု ရှိလာဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ဒီဆုံးရှုံးမှုကတော့ သူ(မ) ရဲ့ ချစ်လှစွာသော ခင်ပွန်းဟာ အမျိုးသမီးလို ဝတ်စားဆင်ယင်ရတာကို သဘောကျသွားခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဒီအမျိုးသားဟာ အမျိုးသမီးဖြစ်လိုခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့ သဘာဝနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတာကြောင့် ဒီစိတ်ကို အတင်းဖိနှိပ်လို့ ယောက်ျားအဖြစ် နေထိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူကို သေလုအောင်ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ အမျိုးသမီးလိုဝတ်စားဆင်ယင်ပြီးနောက် သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို ထပ်တွေ့ခဲ့တဲ့အခါ….
ချစ်ခြင်းနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာမှ ဒီလို အဖြစ်မျိုး ဝင်လာတဲ့အခါ ဇနီးဖြစ်သူက နားလည်ပေးနိုင်ပါ့မလား?ယောက်ျားဘဝနဲ့ ချစ်ခဲ့တဲ့ ဇနီးအပေါ် ချစ်ခြင်းကရော စစ်မှန်ပါ့မလား?နားလည်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းက ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အခါ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ကြမလဲ?
ဇနီးကို ချစ်ပေမဲ့ အမျိုးသမီးလို ဝတ်စားပြင်ဆင် နေထိုင်ရတဲ့ ဘဝကို နှစ်ခြိုက်သွားတဲ့အခါ ဝေခွဲမရတဲ့ ခံစားမှုတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျ၊အားနာမှုတွေ ရောပြွမ်းသွားရင်း… သူတို့ဇာတ်လမ်းလေး ဘယ်လို ဖြစ်သွားမလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ… ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာပဲ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်…။
သီချင်းအတွက်ကိုတော့ ကျွန်တော်က “Mystery of Love” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ရွေးချယ်ထားပါတယ်။ အားလုံးသိကြတဲ့ နာမည်ကြီး Call me by Your Name ထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့။ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ဝင်သီချင်းအော်စကာဆုအတွက်လည်း ဆန်ကာတင်စာရင်းဝင်တဲ့ သီချင်းပါ။ ဆပ်ဖ်ယန် စတီဗင် (Sufjan Stevens) ရေးသားခဲ့တဲ့ သီချင်းပေါ့။ ဇာတ်ကားကလည်း ဇာတ်ကားအလိုက် နာမည်ကြီးသလို သီချင်းကလည်း ဇာတ်ကားနဲ့ တွဲလို့တစ်မျိုး၊ သီးသန့်တစ်ဖုံ နာမည်ကြီးပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆန်ကာတင်စာရင်းထဲမှာ Mystery of Love အပြင် Visions of Gideon လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ MV ရိုက်ဖို့အတွက်တော့ Mystery of Love ကိုသာ Sony က ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။
Mystery of Love ဟာ ကြင်နာခြင်းနဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်ကို ခံစားမိစေတဲ့အပြင် ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ချစ်ခင်မြတ်နိုးခြင်းနဲ့ ကွေကွင်းရခြင်းတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုပါ သံစဉ်တွေကတစ်ဆင့် ထုတ်ပြသွားနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လိင်တူချစ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ လိင်ကွဲချစ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ အချစ်ဟာ အချစ်ပဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုပဲ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲက ချစ်သူပုံရိပ်က ကိုယ်တကယ်ချစ်မိသွားတဲ့သူ ပုံရိပ်နဲ့ ကွဲပြားနေပါစေ ချစ်မြဲဆိုတာလေးကိုလည်း နားလည်သွားစေပါတယ်။ တကယ်တော့ ချစ်ခြင်းဆိုတာ နားလည်ရခက်တဲ့ ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ပဲ မဟုတ်လား?
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မတူညီကွဲပြားတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ၊ လိင်စိတ်တိမ်းညွှတ်မှုတွေ ရှိကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ကိုယ်နဲ့ ကွဲပြားနေပါစေ၊ ကိုယ်ကကိုယ်၊ သူကသူမို့ သူ့နေရာက ခံစားချက်ကိုလည်း နားလည်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ လူ့သဘာဝအရ ကိုယ်မှမထိရင် မခံစားတတ်ကြတာလည်း သဘာဝပဲ မဟုတ်လား.. ဒါပေမဲ့ ကိုယ်နဲ့မတူတိုင်း သူဟာ လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း အပြင်ကလူတစ်ယောက်ရယ်လို့ ခွဲခြားဆက်ဆံလိုက်တာ၊ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတာက မဖြစ်သင့်ဘူးလေနော်… မျက်စိထဲမှာ ငါ၊ သူတစ်ပါး၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမဆိုတဲ့ အစွဲတွေကို ဖျောက်ပြီး လူကိုလူလို၊ ချစ်ခြင်းကို ချစ်ခြင်းလို ခွဲခြားမြင်နိုင်ကြပါစေ…။
Angelic Demon (ရိုးရာလေး)
Previous Previous post: လူကြောက်လေးတို့အတွက် မိတ်ဆွေဖွဲ့နည်း
Next Next post: အမြင်အာရုံမသန်စွမ်းပေမယ့် ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်းပြုပြင်ရေးဆိုင်ဖွင့်န်ိုင်ခဲ့သူ
ကမ္ဘာလှည့်ဖျော်ဖြေရေခးရီးစဉ်ပြီးဆုံးတာနဲ့ ဂီတအလုပ်တွေနဲ့ အဆက်ဖြတ်တော့မယ့် ဗြိတိန်အဆိုတော် Ed Sheeran
ကမ္ဘာကျော်အဆိုတော် အက်ဒ် ရှီရန် (Ed Sherman) ကတော့ အောင်မှုအလီလီရထားတဲ့ ဂီတအလုပ်တွေကို အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အဆက်ဖြတ်စွန့်လွှတ်ထားဖို့ရှိတယ်လို့ ဖွင့်ဟအသိပေးလိုက်ပါတယ်။ အသက် (၂၈) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အက်ဒ် က ၂၀၁၈ ဒီဇင်ဘာမှာလက်ထပ်ခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ ဇနီးသည်…
Published: August 29, 201912:17 pm Updated: August 30, 20199:14 am
ဇန်နဝါရီလမှာ တစ်ကိုယ်တော် တေးအယ်ဘမ် ထွက်ရှိမယ့် ဆူဇီ
လတ်တလော လူကြိုက်များနေတဲ့ While You Were Sleeping ကိုရီးယား ဒရာမာ စီးရီး မှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဆူဇီက ဇန်နဝါရီလမှာ တစ်ကိုယ်တော် တေးအယ်ဘမ် ထွက်ရှိဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ Post Views:…
Published: November 23, 20176:33 am Updated: April 29, 20194:10 pm
တရုတ်မင်းသမီးဖန်ဘင်းဘင်း ပရိသတ်တွေရှေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာလား
တရုတ်ထိပ်တန်းမင်းသမီးချော ဖန်ဘင်းဘင်းဟာ (၂၀၁၈) ခုနှစ်က အခွန်တိမ်းရှောင်မှုကြောင့် ပရိသတ်တွေရှေ့ကနေ ပျောက်ကွယ်နေတာ (၂) နှစ်နီးပါးလောက်ရှိနေပါပြီ။ အခုဆိုရင် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ လီယွီ (Li Yu) ရိုက်ကူးမယ့် ဇာတ်ကားနဲ့ ဖန်ဘင်းဘင်းက ပရိသတ်တွေရှေ့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေထွက်ရှိလို့နေပါတယ်။…
Published: January 8, 20208:55 am